मेरो देश खै ? – श्लेष्मा क्षेत्री – Ketaketi Online
Featured कथा साहित्य
August 11, 2010 December 21, 2021 Ketaketi OnlineLeaveaComment on मेरो देश खै ? – श्लेष्मा क्षेत्री
त्यो क्षणहरु मलाई कहिल्यै पुरानो लाग्दैन जहिले पनि हिजो जस्तै लाग्छ जतिबेलामा म मेरो जन्मस्थान भूटानमा थिएँ । बाबुआमाको एक्लो छोरो, खान लाउन दुःख थिएन । मायाको संसारमा हुर्कदै थिएँ । साथीहरुसंग पनि धेरै आत्मियता थियो अनि जीवनको बाल्यकाल रमाइलै रमाइलोमा बित्यो । मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी कर्मा साह्रै मिलनसार थियो । उसको घर र मेरो घर सँगै थियो हामीमा पारिवारिक मित्रता थियो । हामीले मनाएका हरेक खुशियालीमा हामी दुबैको उपस्थीति हुन्थ्यो । अनि सबैले हाम्रो मित्रतालाई उदाहरण दिन्थे ।
एकदिन भूटानमा भएको राजनितीक आँधिले हामी सबैलाई तहस नहस पारेर हामीलाई लखेटिन बाध्य बनायो । अनि हामीले गन्तब्यहीन यात्रामा भिरपाखामा गुडुल्किदैं भारतको बाटो हुँदै नेपालको पूर्वी भेगको झापाको खुल्ला ठाउँमा आएर सास फेर्यौं । भोक भोकैं दिन काट्यौं अनि आकाशको छतमुनि जीवनको ढुकढुकि साँच्यौं । विस्तारै विस्तारै हामी दयामायाको पात्र बन्यौ र प्राप्त भएका सहयोगबाट हाम्रा लागि स-साना टहराहरु निर्माण गरिए । त्यही टहरामा जीवन विताएको आज सत्रबर्ष बितेछ ।
यही हो हाम्रो सानो संसार जसलाई भूटानी सरणार्थी शिविर भनिन्छ । यो यही शिविर हो जहाँ मैले बाल्यकालपछिको समय विताएँ । अनि अभावै अभावको जिन्दगीमा सम्झौता गर्दै जीवनको गति अघि बढाइ रहें । मेरो आत्मीय मित्र कर्माको साथ त लखेटिएकै दिन छुटेको थियो । त्यसपछि शिविरमा आएको केही बर्षपछि पहिले आमाको माया खोसियो र केही समयको अन्तरमा पिताको माया पनि खोसियो । म त्यसै भौतारिरहेको थिएँ । एकजना साथीसँगको मित्रताको कारण म पनि बसको टिकट काउन्टरमा काम गर्न थालें । काम जस्तो भएपनि आफ्नै मेहेनतको कमाइ भएकोले आत्मसन्तुष्टि मिल्दै गयो । झापाकै केटीसँग विवाहपश्चात जिन्दगी राम्रै रहृयो । एक छोरी र एक छोरासहितको सानो परिवारको जीम्मेवारी निभाउँदै गएँ । त्यसरी नै समयको चक्र घुम्न थाल्यो ।पटक पटक आफ्नो देश फर्किने आशामा आन्दोलनमा पनि नहोमिएको होइन म। एक पटक त ठूलै आन्दोलन भएर धेरै अगाडि बढियो तर मेची पुलमा पुगेपछि आन्दोलन रक्तपातपूर्ण बन्यो । त्यसबेलाको घाउँको खाटा भने अझैपनि राम्ररी पुरिएको छैन । त्यस्तैमा अर्को एउटा नयाँ कुराको थालनी भयो ।
भूटानी शरणर्थीहरुलाई पुनर्वासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास संगठनमार्फत् अमेरिका लगिने । यो कुराले शिविरमा निकै हलचल ल्यायो । कसैले यसका राम्रा पक्षको बखान गर्न थालें भने कसैले नराम्रा पक्ष तर यस हलचलले पनि मेरो परिवारलाई अलग राख्न सकेन । मेरी श्रीमती प्रतिमाले मलाई जिद्दी गर्न लागि हामी पनि आवेदन हालौं भनेर । मलाई भने पटक्कै चासो थिएन । किनकि भित्री मनले मलाई मेरै जन्मस्थलमा जान मन थियो । ढिलो चाँडो जहिले भएपनि मर्नुभन्दा अगाडि । तर के गर्नु कहिलेकाँहि अरुको लागि चल्नु पर्दो रहेछ मैले सोचें मेरो इच्छा भन्दा मेरो परिवारको खुसी महत्वपूर्ण छ । अनि मैले नचाहदा नचाहदै भएपनि अमेरिकामा पुनर्वासको लागि दरखास्त हालें । मेरी श्रीमतीको चाहना अनुरुप नै सबै प्रक्रिया मिल्दै गयो । हामी स-परिवारको तीन पटकसम्म अर्न्तवार्ता भयो अनि हाम्रो यात्रा निश्चित भयो । मेरी श्रीमती धेरै खुसी देखिन थालिन् । उनी निक्कै व्यस्त हुन थालिन् । उनी अमेरिकामा भएका चिन्ने मान्छे खोजी खोजी सम्पर्क गरी त्यहाँको बारेमा आवश्यक कुराहरु संकलन गर्न थालिन् । अनि उनका आफन्तहरुसँग भेटघाटहरु बढ्न थाले । उनी धेरै मिठा मिठा सपना बुन्न थालिन् । कहिले काँहि छोरा छोरीलाई भन्ने गर्थिन्, “तेरा बाबु शरणार्थी भएपनि भाग्यमानी रहेछन् अमेरिका जान पाए” मलाई यस्तो सुन्दा जीवन शून्य बनेजस्तो लाग्दथ्यो अनि मनमनै भन्दथें अमेरिका भनेको क्या हो- जाने सहरको नाम साल्ट लेक सिटी भन्ने सुनिन्छ तर राम्ररी भाषा त बोल्न आउँदैन के काम गर्ने अनि यो बाँकी आधा उमेरलाई कसरी त्यहाँ समर्पित गर्ने फेरि सुनिन्छ हामी जस्तालाई शहरभन्दा टाढा गाउँमा लगिन्छ रे जहाँ हामीले आफ्नो नयाँ जीवनलाई सुरुआत गर्नु पर्छ रे आदि ।